Liverpool Oo Lacag Waali Ah Ku Xirtay Heshiiska Philippe Coutinho & Barcelona Oo Qorshe Layaab Leh Hindistay | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Liverpool Oo Lacag Waali Ah Ku Xirtay Heshiiska Philippe Coutinho & Barcelona Oo Qorshe Layaab Leh Hindistay
Liverpoo ayaa lagu soo waramayaa iney lacago waali ah ku xireyso heshiiska Philippe Coutinho uu ugu wareegayo Barcelona, waxeyna damacsan tahay iney ku xujeyso kooxda reer Spain aduun dhan 120 Malyan oo Euro oo u dhiganta 107 Malyan oo Pound.
Reds goor hore ayey soo diiday dalab hordhac ah oo ay Barcelona ka gudbisay xidiga qaranka Brazil kaas oo gaarayay 72 Malyan oo Pound, balse waxaa la fahansan yahay iney dalab kale oo hormarsan ka gudbin doonto.
Jurgen Klopp wuxuu doonayaa inuu ilaalsado xidigaan heerka caalami, balse warar ka imaanaya Spain waxey sheegayaan in xidigaan uu damacsan yahay xirashada maaliyadda Balaugrana sidaas darteed waxey kaliya ku xiri kartaa lacago waali ah si ay ugu yaraan u hakiso damaca kooxda Camp Nou ka dhisan.
Mundo Deportivo waxey qortay in Liverpool ay dalbaneyso qiimo dhan 107 Malyan oo Pound wuxuuna noqon doonaa kan labaad ee ugu qaalisan dunida hadii Paris Saint Germain ay dhameyso saxiixa Neymar Jr ee ku kacaya 197 Malyan oo Pound.
Dhanka kale Liverpool waxey maleegeysaa qorshe ay uga badbaado lacagaha waalida ah waxeyna usoo bandhigeysaa Liverpool iney qaadato midkood Denis Suarez, Arda Turan iyo Rafinha Alcantara kuwaas oo aan si weyn looga baahneyn Camp Nou